Genesisi 38 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Judha naTamari (1-30)
38 Mazuva iwayo, Judha akasiya hama dzake akanodzika tende rake pedyo nemumwe murume ainzi Hira, muAdhuramu. 2 Ava ikoko, Judha akaona mwanasikana wemumwe muKenani+ ainzi Shua. Saka akamutora akarara naye, 3 uye akava nepamuviri. Akazobereka mwanakomana, Judha akamutumidza kuti Ere.+ 4 Akavazve nepamuviri, akabereka mwanakomana, akamutumidza kuti Onani. 5 Akazoberekazve mumwe mwanakomana, akamutumidza kuti Shera. Akanga* ari kuAkzibhu*+ panguva yaakaberekwa. 6 Nekufamba kwenguva, Judha akatorera Ere dangwe rake mudzimai ainzi Tamari.+ 7 Asi Ere, dangwe raJudha, akanga asingafadzi Jehovha; saka Jehovha akamuuraya. 8 Pakaitika izvi, Judha akati kuna Onani: “Gara nhaka mudzimai wemukoma wako, urare naye uberekere mukoma wako vana.”+ 9 Asi Onani aiziva kuti vana vacho vaisazotorwa sevana vake.+ Saka paairara nemudzimai wemukoma wake, airasira mbeu pasi kuti arege kuberekera mukoma wake vana.+ 10 Zvaaiita zvakanga zvakaipa kuna Jehovha, saka akamuurayawo.+ 11 Judha akati kuna Tamari muroora wake: “Gara uri chirikadzi mumba mababa vako kusvikira mwanakomana wangu Shera akura,” nekuti akati nechemumwoyo: ‘Naiyewo angafa sezvakaita vakoma vake.’+ Saka Tamari akaenda akanogara kumba kwababa vake. 12 Nekufamba kwenguva, mudzimai waJudha, mwanasikana waShua,+ akafa. Nguva yekuchema payakanga yapfuura, Judha akaenda kuvaveuri vemakwai ake, kuTimna,+ neshamwari yake Hira, muAdhuramu.+ 13 Tamari akaudzwa kuti: “Tezvara vako vari kuenda kuTimna kunoveura makwai avo.” 14 Akabva abvisa zvipfeko zvake zveuchirikadzi, akafuka chari, akazvifukidza kumeso, akagara pasi pagedhi reEnaimu, iri mumugwagwa unoenda kuTimna, nekuti akaona kuti Shera akanga akura asi tezvara vake vakanga vasina kuita kuti amutore ave mudzimai wake.+ 15 Judha paakamuona, akabva afunga kuti ipfambi, nekuti akanga afukidza chiso chake. 16 Saka akatsaukira kwaari akati: “Uya tirare tese,” nekuti haana kuziva kuti akanga ari muroora wake.+ Asi iye akati: “Muchandipei kuti murare neni?” 17 Akabva ati: “Ndichatora mbudzana pazvipfuwo zvangu ndokutumira.” Asi akati: “Muchandipa chekufanobata kusvikira maitumira here?” 18 Akati: “Unoda kuti ndifanokupa chii?” iye akati: “Rin’i yenyu yechidhindo*+ netambo yenyu netsvimbo iri muruoko rwenyu.” Akabva amupa zvinhu zvacho, akarara naye, akabva abata pamuviri. 19 Pashure paizvozvo akasimuka, akaenda, akabvisa chari yake, akapfeka zvipfeko zvake zveuchirikadzi. 20 Judha akazotumira mbudzana neshamwari yake muAdhuramu+ kuti adzorerwe zvaakanga afanobatisa mukadzi wacho, asi haana kumuwana. 21 Akabvunza varume vemunzvimbo yacho kuti: “Pfambi iya yepatemberi yaiva muEnaimu mumugwagwa iri kupi?” Ivo vakati: “Munzvimbo ino hamuna kumbova nepfambi yepatemberi.” 22 Akazodzoka kuna Judha akati: “Ndamushaya, uyezve varume vemunzvimbo yacho vati, ‘Munzvimbo ino hamuna kumbova nepfambi yepatemberi.’” 23 Saka Judha akati: “Ngaagare nazvo kuti tirege kuzvishoresa. Ini ndanga ndatumira mbudzana iyi, iwe ukamushaya.” 24 Asi papfuura mwedzi ingasvika mitatu, Judha akaudzwa kuti: “Tamari muroora wako akaita zvechipfambi, uye atova nepamuviri nemhaka yeupfambi hwake.” Judha akabva ati: “Mubudisei apiswe.”+ 25 Paakanga achibudiswa, akatumira shoko kuna tezvara vake, achiti: “Ndine pamuviri pemuridzi wezvinhu izvi.” Akawedzera kuti: “Ndapota, ongororai muone kuti ndiani muridzi werin’i yechidhindo iyi, netambo iyi netsvimbo.”+ 26 Judha akabva azviongorora akati: “Iye akarurama kundipfuura, nekuti handina kumupa mwanakomana wangu Shera.”+ Uye haana kuzomborarazve naye. 27 Pakasvika nguva yekuti asununguke, mudumbu make maiva nemapatya. 28 Paakanga achisununguka, mumwe akabudisa ruoko rwake, nyamukuta akabva atora kachira katsvuku akakasungirira paruoko rwake, akati: “Uyu ndiye atanga kubuda.” 29 Asi paakangodzorera ruoko rwake, mumwe wacho akabva abuda, uye nyamukuta akati: “Inga wazvitsemurira pekubuda napo!” Saka akatumidzwa kuti Perezi.*+ 30 Mumwe wacho aiva nekachira katsvuku paruoko rwake akazobuda, akatumidzwa kuti Zera.+
^ Kana kuti “Kezibhi,” maererano nezvinyorwa zvevaMasoreti. Zvinonzi ndiyo imwe cheteyo neAkzibhu inotaurwa pana Joshua 15:44 naMika 1:14.
^ Kana kuti “yechisimbiso.”
^ Kureva kuti “Kutsemuka,” zvichida zita racho riri kutaura nezvekutsemuka kunogona kuitika pakusununguka.